Apple ịkwụ ụgwọ karịrị PayPal wee bụrụ usoro eji akwụ ụgwọ ekwentị eji eme ihe na US | Esi m mac
Apple ịkwụ ụgwọ karịrị PayPal wee bụrụ usoro eji akwụ ụgwọ ekwentị eji eme ihe na US
Kemgbe mmalite nke Apple Pay na October 2014 naanị na United States, obere nke nta, ụdị ego ịntanetị a na-abawanye ụba n'etiti ndị ọrụ na azụmahịa. Dị ka onye isi Apple Pay, Jennifer Ballner si kwuo, ugbu a, otu n’ime ụlọ ahịa atọ dị na United States na-enye ndị ahịa ha ụdị ịkwụ ụgwọ a. Tupu njedebe nke afọ, Apple na-atụ anya na ọ ga-enwe ike iru abụọ n'ime ụlọ ahịa atọ na mba niile. Ekele maka mmụba meteoric a, Apple jisiri ike bụrụ sistemụ ịkwụ ụgwọ a na-ejikarị na United States, gụnyere PayPal.
Ugbu a Apple na-akwado 36% nke ndị ahịa America na mba ahụ dum, ebe ọnụego PayPal bụ 34. N'ọnọdụ nke atọ anyị na-ahụ MasterCard PayPass, na-esote Andrei Pay na 24% na Visa Checkout na 20%. Samsung, nke na-enyekwa usoro ịkwụ ụgwọ kọmputa ya, mana nke dị n'ahịa maka obere oge karịa Apple, achọtara ya na 18% nke azụmaahịa ndị America.
Dabere na Boston Retail Parners, ụlọ ọrụ ahụ mepụtara nhazi a, Apple Pay ga-ahụ na 22% ụlọ ahịa ndị ọzọ, ọnụ ọgụgụ ndị dị iche na amụma amụma Apple, dị ka m kwuru na mmalite nke isiokwu a. Ihe doro anya bụ na ruo mgbe afọ ahụ gafere, anyị agaghị enwe ike ịmata onye dị nso na amụma, ma ọ bụrụ na Apple ma ọ bụ Boston Retail Partners. Maka ugbu a, Apple ga-aga n'ihu na-elekwasị anya na ịgbasa teknụzụ a n'ụwa niile, ebe ọ bụ na ọ dị ugbu a naanị ntakịrị karịa mba iri na abụọ, gụnyere naanị Spain dị ka mba na-asụ Spanish.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple ịkwụ ụgwọ karịrị PayPal wee bụrụ usoro eji akwụ ụgwọ ekwentị eji eme ihe na US
Gam akporo Wear 2.0: mmelite iji sọọ mpi na Apple Watch
Free maka obere oge Roket - Nchọpụta ihe nrụpụta. Ejikwa otú arụpụta gị n'ihu Mac